Xiliga Dagaalka Qaboow Uu Ka Qarxo Sariirta Haweenka Maxay U Dhibsadaan Malabyarowga ? Sababta Oo Laguu Hayo - Hablaha Media Network
HMN:- Xanuunada dhaca xiliga ciyaarta lagu jiro ayaa ah arin aad ugu badan lamaanayaasha , waxa ayna haween badan is weydiinayaan sababa ah xanuunadaas u dareemaan hadaba Shumis.net ayaa ku sheegeysa dhowr arin oo u sabab ah arimahaan .
1- In uu jiro xanuun dhanka gudaha minka ah iyadoo taas ay keeneyso in ay dareento xanuunka marka malabyarowga uu garaacayo.
2- In ay aad ukala baxsan yihiin ama isugu dhagan yihiin murqaha xubinta haweenka , waxa ayna tani dhacdaa marka ay haweeneyda ka baqdo xanuun ama si kale ay uga wel welsan tahay malabyaroowga .
3- In haweeneyda aqoon badan u laheyn xubinta oo ku aadan in uu qalalayo marka kulankana ay xanuun dareensiineyso , waxaa alcarabiya ku talineysaa in aad isticmaasho kareemo adiga oo taqtar u tegaya .
4- In uu jiro buro ku dhagan darbiga minka ama in mashaakilo ka jiraan goobta ukxaanta .
5- ama in ukxanta aan qarxin ay ku abuuranto banaanka minka